May 2022 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Namhlanje KUSAZIWAYO NEMALI sikuphathele intandokazi yomrepha, uDuncan ‘Skuva Maguluva’ Mbambo odume ngamanoni athi Ring of Lies, Tsikitsiki Remix ne-AmaWeave. U-Duncan useke wahlabana ngezindondo eziningi, enye yazo yeBest Remix ayithola kumaMetro FM Awards ngeTsiki Tsiki
Yebo, kodwa ngangiyithola uma kade ngikhalela umama uma ehamba noma (ngikhumuke) izinyo bese ethi ugogo angilibeke esicathulweni igundane lizongipha imali.
UMnu uVusi Zuma, umsunguli weNceks Quad Biking
Uthando lokuvakasha nomndeni wakhe lumholele emqondweni webhizinisi lokungcebeleka elihlukile kubantu abamnyama. Uxoxe noLANGA KHANYILE
UKUPEPENYEKA ngezimbembeshwana ezimasondokazi amane yibhizinisi lokungcebeleka elingavamile lapho kwakhe indlu emnyama khona. Cishe nosomabhizinisi abamnyama abanama-quad bike ngeke beqe esandleni uma bebalwa.
Yimithetho nendawo osomabhizinisi abasebenzela kuyo okuzocacisa ukuthi kutholakala imiphumela enjani, kuloba uBusi Mavuso
ENYE yezinkinga engihlangabezana nazo uma ngixoxa nabalingani kuhulumeni, izinyunyana nezinhlangano ezingenzi inzuzo yindlela ababuka ngayo osomabhizinisi – njengenhlangano eyodwa abangaxoxisana nayo.
Madoda asiyeke ukuba ngamankentshane uma abesifazane becela usizo ngebhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngithanda sibheke indaba yokuvalela abantu besifazane ngaphandle emabhizinisini. Kuyadabukisa ukubona ukuthi nango-2022 kusenomqondo obhedayo wabanye abantu besilisa wokwenza nzima impilo kubantu besifazane abangosomabhizinisi noma abafisa ukuba ngosomabhizinisi.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza umthetho olawula ukucwasa ngokwebala
UMnu uZithulele Mdadane, umsunguli weHlumakahle Agriculture yaseThekwini, KwaZulu-Natali
LiHlumakahle ibhizinisi lomlimi owujikelele kule mboni. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
UKHULE ecabanga ukuthi uyise “uyahlupheka” ngoba wayengaqashiwe njengabanye abantu. Kepha wavuleka amehlo ngonyaka ambona ngawo edayisa izinkomo ukuze abakhokhele esikoleni nezingane zakubo.
UMnu uNkosenhle Ngongoma, i-chief information officer e-Ascendis Health
Okhuthazwe wububha nobu‘vila’ wenza ezibukwayo kwezobuchwepheshe. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe
“WENZA kanjani (ukuthi) isizukulwane esilandelayo sibone ukuthi imfundo yiwona khiye wempumelelo njengoba kugcwele abantu abaneziqu abahluphekayo nezigebengu ezicebile?”
IMeya yaKwaMhlabuyalingana uMnu uThembinkosi Khumalo icelwa ngosomabhizinisi abasafufusa ukuthi ingenelele ekuxoshweni kwabo
Asafufusa Ezinohlonze Izindaba
Abasafufusa bakhala ngomasipala abathi ubaphuca isinkwa. USLINDILE KHANYILE uyabika
OSOMABHIZINISI abasafufusa baKwaMhlabuyalingana, eNyakatho yeKwaZulu-Natali, bakhala ngomasipala ngokubabulala ngendlala njengoba bethi baxoshwe emakethe asebeneminyaka besebenzela kuyona. Basola omunye wabaphathi bakamasipala abathi usanda kuqashwa kanti uzenzela umathanda.
Kuleli Sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa nomculi nombhali wezingoma uMakhosazana Masango odume ngelika-Azana. U-Azana udume ngengoma ethi Your Love ebuye ibe yibika loThando Nes’thembu neyayikwiTop 10 yoKhozi FM. Yake yaqokwa emikhakheni emine kumaSouth African Music Awards
Yebo, kwakuyimali yokukhokha irenti nokuthenga ukudla.
USolwazi uLungile Ntsalaze weJohannesburg Business School yase-University of Johannesburg uthi ayisukunyelwe eyamabhizinisi amancane nobuchwepheshe
Iseyinde indlela okusafanele ihanjwe yiNingizimu Afrika ukuthuthukisa asafufusa ngobuchwepheshe kodwa sekuntwela ezansi. USLINDILE KHANYILE uyabika
AMABHIZINISI amancane asengozini yokuwa noma kuzoncipha inzuzo ayenzayo uma engayisukumeli indaba yokuguqula indlela asebenza ngayo ukuze ahambisane nobuchwepheshe besimanje kanti loku kubeka imisebenzi engcupheni.
Izingqapheli zithi abathengi abazibambe ziqine ngoba ukubiza kwezinto kusazoqhubeka isikhathi eside
Izingqapheli zixwayisa ngokuthi abathengi basazodonsa kanzima njengoba nemalimboleko kubhekwe ukuthi inyuswe. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUSAZOTHATHA isikhathi ngaphambi kokuthi amanani okudla nokubiza kwezinye izinto, okudalwa wukwehla kwamandla emali kuyeke ukuqonga, kanti kudingeka ukuthi abathengi bazibambe ziqine ngoba nophethroli kulindelwe ukuthi unyuke ngamawala ngenyanga ezayo, ngaphandle uma uhulumeni uzophinde ungenelele.
Asingadikibaliswa wukucinywa kukagesi, ushintsho lusemome, kuloba uBusi Mavuso
NGABE osomabhizinisi sebekulungele ukuba nogesi osebenza kahle? Kulula ukugcina sesikhohlwa wukubaluleka kokuba nesisombululo esizosisiza isikhathi eside ukuphehla nokusabalalisa ugesi ngenxa yokucinywa kukagesi okungapheli.
Abadedelwe abantu bazibambele ukuthuthukisa ingqalasizinda, kuloba uNtokozo Biyela
KULE ngosi ngithanda sibheke ukuthi mhlawumbe sesifikile isikhathi sokuthi uhulumeni udede emsebenzini wokuhlinzeka ngentuthuko, kunalokho udlulisele izintambo zokwenza lo msebenzi kubantu.
Umphathi weBhange loMbuso uMnu uLesetja Kganyago uthi i-Ubank isingaphansi komlawuli
Inyunyana ishaya amakhala ngesinqumo seBhange loMbuso nge-Ubank. USLINDILE KHANYILE uyabika
I-NATIONAL Union of Mineworkers (iNUM), engabanye babanikazi be-Ubank, ithi isinqumo seBhange loMbuso sokufaka leli bhange ngaphansi komlawuli yiqhinga lokuphoqa ukuthi ivume ukuthengwa yi-African Bank, nethi ifuna ukukhokha “utiki” owuR100 million ukulithenga lonke leli bhange.
UNksz uMatome Mokgobu, umlimi nomnikazi weMosibudi Trading Enterprise yaseBochum, eLimpopo
Izithombe: yiVutivi News
Unezifiso ezinkulu umlimi oqale ngengadi encane kubo kodwa osedayisela izitolo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
KUNINGI umlimi waseLimpopo akuthandayo nakufisayo njengokuguqula umhlaba osesigodini sakubo ukuthi ukwazi ukukhiqiza abazokudayisa ukulwa nobubha nokwakha amathuba emisebenzi.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza imigudu elandelwayo uma izisebenzi zifuna ukuteleka
UMnu uKenneth Klaas, umsunguli we-Untrained Chefs yaseSoshanguve, eTshwane
Ubhubhane iCOVID-19 lube yisibusiso kodlondlobalayo embonini yezokudla. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
NGESIKHATHI eyeka umsebenzi ayeqashwe kuwona embonini yezokwakha ngoba enzela ukugxila ebhizinisini lakhe lokudla, wayengalindele ukuthi lizophumelela ngokushesha.
Usihlalo we-Uthungulu Investment Holdings uMnu uMusa Myeni
Uthisha onentshisekelo yokukhulula ingane yomdabu, isiboshwa sepolitiki, isisebenzi somphakathi nebandla, isifundiswa nosomabhizinisi ufafaza ivangeli lokuzimela. Uxoxe noLANGA KHANYILE
NGEMVA kwango-1994 uhulumeni wobandlululo usugobe uphondo ekucindezeleni abantu bomdabu e-Afrika, umuntu esenevoti eNingizimu Africa, kunohlobo losomabhizinisi olwaqubuka – amaRupert amnyama.
UNksz uLee Nyathikazi, umsunguli weNgoma Wines yaKwaNdengezi, eThekwini, KwaZulu-Natali
NGESILATINI kuthiwa in vino veritas, okusho ukuthi lapho kunomvini (iwayini) khona, kuneqiniso noma oqhabule iwayini uyazikhiphela iqiniso.
Kuleli Sonto kuSaziwayo neMali sikuphathele uThemba Sibanyoni, umlingisi nomculi osanda kuklonyeliswa ngendondo kumaRoyalty Soapie Awards. Uthole indondo ngendawo eyidlalayo kwi-Diep City futhi wayesemdlalweni wamahlaya i-Ses’ Top La
Usemcane wawuphiwa imali?
Yebo, ngenkathi abazali besaphila
UMnu uMosa Hlatshwayo, umnikazi wenkampani yezimpahla zokugqoka i-Odd yaseMamelodi, eTshwane
Ufeza isifiso abanaso esaqashiwe owashiya ubumnandi besikhundla emsebenzini. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
NAKUBA kwakunzima ukushiya umsebenzi wakhe esitolo esikhulu sezimpahla zokugqoka kodwa yisinqumo angazisoli ngaso.
Asiphokophele imfundo eseqophelweni eliphezulu, sivikele inkululeko yethu, kuloba uReuel Khoza
NGICELA ukubonga kakhulu iNyuvesi yaKwaZulu-Natali ngokubona kufanele ukungiqoka ukuthi ngibe wuShansela walesi sikhungo esihloniphekile. Ngilamukela leli thuba ngesikhathi esibuhlungu emlandweni wezwe lethu. Lobu buhlungu benzeka ngenxa yokungenzi kahle nokungasebenzi kahle (kwezinye izinto). Uma sibheka okwenzakalayo, sibonani?
Ziseningi izinselelo kodwa kuningi nesesikuzuzile, kuloba uBusi Mavuso
ASIJWAYELE ukuma kancane sibuyekeze indlela inqubomgomo yethu esithuthuke ngayo. I-Operation Vulindelela, uhlelo lwehhovisi likaMengameli nomNyango wezeziMali, seluzuze izinto eziningi nakuba ezinye zisabanjwe yimicikilisho ngaphambi kokuthi zisebenze kahle kodwa siphezu kwazo.
Konakele nje emabhizinisi abantu abamnyama yingoba asihloniphani, kuloba uNtokozo Biyela
KULE ngosi ngithanda sibheke isifo sokungahloniphani singabantu abamnyama kwezamabhizinisi. Akubalulekile noma ngabe uwena umnikazi webhizinisi noma usebenza ebhizinisini noma liphi.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ukubaluleka kokuphawula ngemigomo yezempilo yokulawula iCOVID-19
UMnu uMusa Zulu, umsunguli weValhalla Arts, okhuthaza ngezinkulumo, umbhali, umdwebi nesishabasheki sabantu abakhubazekile
Owacijwa emncane unevuso lokucija abanye nokukhuthaza abaphelelwe yithemba. Uxoxe noLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe
ISIZULU sithi inkunzi isematholeni. Kunjalo nakumakadebona kwezokuphatha, usomabhizinisi, isishabasheki sabantu abakhubazekile nesikhulumi sezinkulumo ezikhuthazayo.
UMnu uMaime Kolobe, umnikazi weSensational Paving Gurus yaseKroonstad, eFree State
Owenza ezibukwayo ngenkampani ehlobisa amagceke ufisa ukubona amalokishi eqhakaza njengamadolobha. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
KWAKUNGENELE ukuqhamuka emndenini owenza izitini ukuqinisekisa ukuthi ukhiqiza izitini ezisezingeni phezulu. Isifiso sakhe sokwenza imizi yaselokishini ibemihle njengeyaselungwini yisona esimgqugquzela zonke izinsuku.
Kuleli sonto KUSAZIWAYO NEMALI sixoxa noMC Pholoba, umsakazi weSiyaviva TV, usomabhizinisi nosihlalo weMasiqoqane Albinism Foundation
UMnu uPhiello Tsotetsi, umsunguli weBatlokwa Detergents, eyenza imikhiqizo yokuhlanza indlu yaseGoli, eGauteng
Izingqinamba zimqinise ukhakhayi onemikhiqizo esinabele nakwamanye amazwe. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
USEPHOXEKE kaningana usomabhizinisi kodwa kukho konke lokhu kuphoxeka ubethola isifundo, nokumsizile njengoba imikhiqizo yenkampani yakhe isitholakala nakwamanye amazwe aseNingizimu ye-Afrika.
Osomabhizinisi bashaya amakhala nge-Bounce-Back Scheme
USIZO oluhlinzekwa wuhulumeni ukutakula amabhizinisi akhahlanyezwe yiCOVID-19, udlame olwabheduka ngoJulayi wango-2021 nezikhukhula ezisanda kuhlasela KwaZulu-Natali ngeke lusize ngalutho futhi lufike emva kwendaba.
KULE ngosi ngithanda sibheke lento encomekayo engiyibona yenzeka eNingizimu Afrika. Uma uqaphelisisa uzobona ukuthi ayanda ama-brand amasha asungulwa ngabantu abamnyama kanti nabantu bakithi sebethanda ukuthenga ama brand asungulwe ngabakubo kunakwamanye amazwe.
UMnu uZamokuhle Thwala, isikhulu esiphezulu se-Agrikool eseMgungundlovu, KwaZulu-Natali
Usebenzisa ubuchwepheshe nezolimo ukuvulela abalimi iminyango ofike kwezwakala kule mboni. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
WAYAZI ukuthi ngelinye ilanga uyoba nebhizinisi nokungakho engapholisanga maseko ngokuliqala njengoba kwathi eqeda enyuvesi lase likhona.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza umgomo ogunyaza ukuphula inkontileka